Amabinzana ngeNtombi Enyulu yaseGuadalupe ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Intombi Enyulu yaseGuadalupe yenye yezona zinto zibalulekileyo kwezenkolo ehlabathini. Ilizwe apho iqale khona ukubonakala eMexico. Nangona kunjalo, akuzange kube kudala waba ngumntu obalulekileyo kumaKatolika nakwabo bangengomaKatolika kwihlabathi liphela. Apha sikubonisa intle amabinzana kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe, ukuze ukwazi ukuzinikezela kumfazi wethu omkhulu, osinika uncedo kunye nokhuselo kwaye umcele wena kunye nabantu obathandayo.
1 Amabinzana amahle wokuzinikela kwiNtombikazi yaseGuadalupe
2 Amabinzana asuka kuPope Francis aya kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe
3 Ngubani iNtombi Enyulu yaseGuadalupe?
4 Ukuzinikela kwiNtombi Enyulu
5 Imithandazo kwintombi emnyama
Amabinzana amahle wokuzinikela kwiNtombikazi yaseGuadalupe
Enoba uyinkolo okanye akunjalo, ngaphandle kwamathandabuzo, uya kuthi ngexa elithile ubone umfanekiso weNtombi Enyulu yaseGuadalupe. Ukuba unqwenela, ukongeza ekuthandazeni kule Ntombi ifileyo, nikezela amabinzana athile ukuze umcele kwaye umbulele ngoncedo nokhuselo lwakhe, nazi ezinye zazo:
Ulithemba lethu elimnandi ekukrakra kobu bomi.
Enkosi ngokusoloko ulapho, ngakumbi xa ndingakubizi.
Owu, Oyena Nyulu unyulu waseGuadalupe! Gcwalisa intliziyo yam ngothando kwaye ukhusele usapho lwam kwaye usikhulule kwimiqobo engathandekiyo yobomi.
Nyulu eyiNtombi eGuadalupe! Umama oNgcwele kaThixo, inenekazi kunye nesikhokelo sethu sonke. Ngomfanekiso wakho osikelelekileyo ndiwuphakamisa namhlanje.
Intombi enyulu yaseGuadalupe, umphefumlo wesisa wabakhubazekileyo, ndikhusele ngale mini kwaye ungavumeli into embi ukuba yenzeke kum kwaye ichaphazele ukuzinikela kwam kuwe.
Oyintombi eNgcwele yeNkosi, umkhuseli wabangenakuzinceda, vumela ukuchuma nozuko ukuba kundikhaphe ngonaphakade kanaphakade.
Ntombi eyintanda yaseGuadalupe, yiba ngumkhokeli kunye nomkhuseli wam kule mizuzu yentuthumbo.
Qiniseka ukuba ndiyayixabisa kakuhle kwaye ndiza kuyibhatala, kuba ndiza kukonwabisa kwaye uyakufanelekela ukuba ndiwuvuze umsebenzi kunye nokudinwa oza kuthi uzokufumana oko ndikunika kona.
Ukumkanikazi waseMexico, sikhusele. Ntombi enyulu yaseGuadalupe, sikhusele kwizilingo, usithuthuzele kulusizi kwaye usincede kwiimfuno zethu.
Ntombi enyulu yaseGuadalupe, sibungcwalisela ubomi bethu, imisebenzi yethu, uvuyo lwethu, ukugula kwethu kunye neentlungu zethu kuwe.
Ntombi enyulu yaseGuadalupe, mama wam, ndithandazele kwaye el mundo iphelele. Enkosi ngothando lwakho olukhulu.
Amabinzana asuka kuPope Francis aya kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe
USupapa oPhakamileyo unikezele amabinzana amnandi kwiNtombikazi yaseGuadalupe. Sibabonisa apha ngezantsi:
Ukujonga eGuadalupana kukukhumbula ukuba utyelelo lweNkosi luhlala ludlula kwabo bafuna ukwenza "inyama" ngelizwi lakhe.
Kanye njengokuba uJuanito omncinci wenziwa ukuba abekhona, ngendlela efanayo uqhubeka nokuzenza abekhona kuthi sonke; ngakumbi abo, njengaye, baziva bengento yanto.
Ukubhiyozela inkumbulo kaMariya kukuqinisekisa, ngokuchasene nazo zonke iingxaki, ukuba ithemba elinamandla libetha ezintliziyweni nakubomi babantu bethu, ngaphandle kweemeko zobomi ezibonakala ngathi zisithe lonke ithemba.
Ngubani iNtombi Enyulu yaseGuadalupe?
Intombi Enyulu yaseGuadalupe yamkelwe yiCawa yamaKatolika kwaye yamkelwa ngamakholwa nangabantu abangakholwayo kwihlabathi liphela. Ukubonakala kwayo okokuqala kwenzeka eMexico, ngonyaka we-1531.
Indoda encinci yemveli, egama linguJuan Diego Cuauhtlatoatzin, yayikhangela umntu onokuphilisa ukugula kukamalume wakhe. Endleleni yakhe, weva ilizwi lomntu ambizayo, ecaleni kwenduli iTepeyac. Ukufika kwakhe encotsheni, wabona ubungqina beNtombi Enyulu yaseGuadalupe, "eyambethe ilanga." Oku kwenzeka kwindawo eyaziwa ngoku njengeCuatitlán, kwiLizwe laseMexico.
UJuan Diego wabona ukubonakala kweNtombi Enyulu yaseGuadalupe kwizihlandlo ezi-4. Kwisihlandlo se-5, wangqinelwa ngumalume wakhe, uJuan Bernardino. Intombi enyulu yayicele uJuan Diego ukuba ayakhele itempile ngembeko kunxweme lwaseCerro Tepeyac. Kwisithuba sesi-5, xa umalume wakhe naye wakubonayo oko, wacela uJuan oselula ukuba aye encotsheni yenduli ayokuthatha iintyatyambo, awayezakuzithatha phambi kukabhishophu njengobungqina bemimangaliso yakhe.
Umfana waya kubona uBhishophu Zumárraga ephethe iiroses, owamkela ezi ntyatyambo kwaye wakubona ukuba, njengoko zazisiwa kwisambatho sikaJuan Diego, umfanekiso weNtombi Enyulu yaseGuadalupe watyhilwa.
Ukusukela ngoko, le ngubo yaziwa ngokuba "yingubo yeNtombi Enyulu" kwaye uhambo lokundwendwela lwaqala ukuhlonipha ubukho obumangalisayo beNtombikazi.
Konke oku kwenzeka nge-12 kaDisemba ngo-1531, ukuze wonke umhla we-12 kuDisemba ubhiyozelwe usuku lweNtombi Enyulu yaseGuadalupe, eyaba ngumntu obalulekileyo kwizigidi zabantu, hayi eMexico kuphela, kodwa kwihlabathi liphela.
Ukuzinikela kwiNtombi Enyulu
Rhoqo nge-12 kaDisemba, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, kunqulwa ingubo yeNtombi Enyulu yaseGuadalupe. Oku kubekwe kwiBasilica yaseGuadalupe, kwinduli yaseTepeyac, eCuatitlán, namhlanje sisiXeko saseMexico. Eli liziko lemibhiyozo yeNtombi Enyulu yaseGuadalupe.
Ukusukela ekubeni ibali lowaziwa ngokuba yi "Dark Virgin" laziwa, ukuzinikela kuye kwasasazeka kwihlabathi liphela. Oku kukholelwa ukuba sesona sibonakaliso sakutsha nje seNtombi Enyulu kwaye, ingubo, ubungqina bobukho bayo. Ngesi sizathu, kumazwe amaninzi, ayinqulwa nje kuphela eMexico. Bonke abo, abakholwayo nabangakholwayo, abaneengxaki, abanye bayafuna, ukugula, ubunzima ngokubanzi, bahlala becela iNtombi Enyulu yaseGuadalupe ukuba ibathethelele ukuphucula imeko yabo. Ukholo nokuzinikela kuyo ngoku ngaphandle kwamathandabuzo yinto eyimbali.
Imithandazo kwintombi emnyama
Nantsi imithandazo emibini yomama wabo bonke abantu baseMexico kunye nehlabathi:
«Makusikelelwe ubunyulu bakho, kwaye nangonaphakade, kuba uThixo uphela uyavuya kobo buhle bunobabalo. Kuwe, nkosazana yasezulwini, iNgcwele iNtombikazi enguMariya! Ndikunikela ngolu suku: umphefumlo, ubomi kunye nentliziyo; Ndijonge ngovelwano kwaye ungandishiyi, mama, ngaphandle kwentsikelelo yakho engcwele!
Owu, nenekazi lam! Oh yam! Ndizinikela kuwe ndonke kwaye kubungqina bothando lwam lobuzali ndingcwalisela kuwe ngalo mhla, amehlo am, iindlebe zam, ulwimi lwam, intliziyo yam; ngelizwi, yonke into endiyiyo. Kuba ndingowakho wonke oh Mama wokulunga, ndigcine kwaye undikhusele njengepropathi yakho kunye nelifa lakho.
Ukuba ufuna ukuthandaza kwiNtombikazi enguMnyama, sicebisa ukuba ufunde umthandazo kwiNtombi Enyulu yaseGuadalupe. Uya kufunda ngakumbi ngokubukela le vidiyo ingezantsi.